PaveAI: कसैले अन्तमा गुगल एनालिटिक्समा जवाफहरू फेला पारे! | Martech Zone
PaveAI: कसैले अन्तमा गुगल एनालिटिक्समा जवाफहरू फेला पारे!
सोमबार, फेब्रुअरी 27, 2017 सोमबार, फेब्रुअरी 27, 2017 Douglas Karr
वर्षौं सम्म हामीले दुबै ग्राहकहरु र पेशेवरहरु मा आधारित छ कमजोर निर्णयहरु बनाउने संग विश्लेषण। त्यहाँ धेरै कमजोरीहरू छन्, विशेष गरी Google विश्लेषण, कि व्यक्ति अक्सर सजग छैनन्:
नक्कली ट्राफिक - विश्लेषण ट्राफिकमा बट्स द्वारा गरिएको भ्रमणहरू सामिल हुँदैन। समस्या यो हो कि त्यहाँ लाखौं बोटहरू छन् जुन उनीहरूको पहिचान बोटको रूपमा अस्पष्ट पार्दछ। तिनीहरू एक पटक छोटो क्षणको लागि भ्रमण गर्छन्, कृत्रिम रूपमा तपाईंको बाउन्स दरहरू बढाउँदै र साइटमा तपाईंको समय घटाउँदै। यसको लागि राम्रोसँग फिल्टर नगरी तपाईं केही नराम्रो निर्णय लिन सक्नुहुनेछ।
भूत यातायात / रेफरल स्पाम - त्यहाँ बेवकूफहरु बाहिर छन् कि तपाईंको spoof विश्लेषण पिक्सेल र तपाईंको यातायात ड्राइव अप देखाउदै कि ती तपाईंको लागि एक रेफरल साइट हो। तपाईं उनीहरूलाई रोक्न पनि सक्नुहुन्न किनकि तिनीहरूले तपाईंको साईट भ्रमण गर्दैनन्। फेरी, ती भ्रमणहरू तपाइँबाट फिल्टर नगरेकोले तपाइँका निर्णयहरूमा प्रभाव पार्न सक्दछ।
अनजान ट्राफिक - उद्देश्यका साथ तपाईंको साइटमा आएका आगन्तुकहरूको बारेमा के भने, तर छोडियो किनकि उनीहरूले केहि अरू खोजिरहेका थिए? एक पटक हामीसंग एक ग्राहक थियो जुन स्थानीय रेडियो स्टेशनको कलिंग कोडको लागि धेरै उच्च स्थानमा थियो। जहिले पनि रेडियोमा प्रतिस्पर्धा थियो, तिनीहरूको ट्राफिक बढ्यो। हामीले पृष्ठ हटायौं र यसलाई खोजी इञ्जिनहरूबाट हटाउन अनुरोध गर्‍यौं - तर यो मार्केटिंग टोलीमा विनाशकारी हुनु भन्दा पहिले जसले यो फेला पार्न सकेनन्।
त्यसोभए तपाईं कसरी फिल्टर र सेग्मेंट गर्नुहुन्छ तपाईंको विश्लेषण डाटा तल एक प्रयोग योग्य, तथ्या valid्क मान्य वैध खण्डमा जसले तपाईंलाई पर्यटकहरूको व्यवहारको सही विश्लेषण गर्न सक्षम गर्दछ?
PaveAI: स्वचालित एनालिटिक्स अन्तर्दृष्टि
स्वागतम् PaveAI। PaveAI ले तपाईंलाई गुगल एनालिटिक्स, गुगल खोजी कन्सोल, गुगल ऐडवर्ड्स, फेसबुक विज्ञापन, इन्स्टाग्राम विज्ञापन (फेसबुक व्यवसाय प्रबन्धक मार्फत) र ट्विटर विज्ञापन एकीकृत गर्न अनुमति दिन्छ। तिनीहरूको प्लेटफर्मले त्यसपछि एआई एल्गोरिथ्म र विभिन्न सांख्यिकीय वर्गीकरणहरू प्रयोग गर्दछ तपाईको मार्केटिंग डेटामा आधारित तपाईले ठोस निर्णयहरू लिन आवश्यक सबै डेटा फिर्ता लिनुहोस्। रिपोर्टहरू पनि खण्डहरू प्रदान गर्दछ र उनीहरूको नेतृत्व वा ग्राहक बन्ने संभावना।
हामी केहि धेरै प्रणालीहरू नमूना गर्न सक्छौं जसले गुगल एनालिटिक्सलाई आधुनिक अंग्रेजीमा रूपान्तरण गरे र केही उत्कृष्ट रिपोर्टहरू प्रदर्शन गरे। र हामी त्यहाँ एक धेरै ड्यासबोर्डि tools उपकरणहरु संग गडबड गरेका छौं ... तर ती मध्ये कुनै पनि हाम्रो ग्राहकहरुलाई तिनीहरुलाई आवश्यक पूर्वावलोकन थिएन न त हामीलाई समायोजन गर्न आवश्यक अन्तरदृष्टि प्रदान गर्दै थियो। PaveAI दुबै गर्छ! तथ्य यो छ कि तिनीहरूले पनि तपाईंको रिपोर्ट विश्लेषण लक्ष्य र सत्र अवधि पनि अमूल्य छ। यहाँ छ नमूना रिपोर्ट:
PaveAI नमूना रिपोर्ट - लीड जेनेरेसन
PaveAI पहिले नै प्रत्येक महीना 400 मिलियन आगन्तुकहरु को डेटा प्रक्रिया। तिनीहरूले रेफरर स्पाम स्वचालित रूपमा हटाउँछन् र तपाईंको न्यूजलेटर सदस्यता डेटा पनि ल्याउँदछन्।
PaveAI: लाभ र उपयोग केसहरू
तिनीहरूको बेन्चमार्किंगमा, PaveAI ग्राहकहरुलाई एउटा हासिल गर्न मद्दत गरेको छ नेतृत्व उत्पादनमा औसत% 37% वृद्धि वा राजस्व तीन महिना पछि, र औसत २x रिटेन्सन एक बर्ष अवधिमा एजेन्सीहरूको लागि। विवादास्पद प्रणालीबाट रिपोर्टहरू संकलन र संकलनमा बजारलाई बचत गर्न उनीहरूले मद्दत गरिरहेका समयको उल्लेख नगरीकन।
एक 14-दिन नि: शुल्क PaveAI परीक्षणको लागि साइन अप गर्नुहोस्
प्रदान गरिएको डाटाको मूल्य दिएर मूल्य निर्धारण अविश्वसनीय सस्तो हुन्छ। PaveAI इन्टर्प्राइज लाइसेन्सिंग, एजेन्सी लाइसेन्सिंग, र व्हाइटलेबलिंग पनि उपलब्ध छ।
टैग: aiविश्लेषणकृत्रिम बुद्धिईमेल एनालिटिक्सGoogle विश्लेषणनेतृत्व पुस्ताpaveaiभविष्यवाणीभविष्यवाणी एनालिटिक्ससम्भावना
Vimeo नयाँ सहयोग र एकीकरण उपकरण भिडियोग्राफरहरूको लागि मानकको रूपमा यसलाई स्थापना गर्दछ
Vision6 निमन्त्रणा र अतिथि-सूची प्रबन्धन को लागी ইভেন্টब्रेट एकीकृत गर्दछ